Bright Smile White | Indlela Engcono Kakhulu mhlophe Amazinyo Guide
Posts umake "Bright Smile White"
Abantu abaningi isikhathi eside amazinyo abo kumhlophe. Kunezindlela ezihlukahlukene izenzo ongayenza ukuze uqiniseke ukuthi amazinyo akho ngeke phuzi. Kunezindlela mhlophe amazinyo akho amhlophe aphinde. Lesi sihloko kuhlanganisa amathiphu ezahlukene ukuthola wena amazinyo amhlophe futhi ugcine mhlophe.
Qiniseka Amazinyo akho anjengomhlambi babegcina bahlanza ngaphambi kokusebenzisa ekhaya mhlophe amazinyo eziyalezweni. Amazinyo mhlophe imikhiqizo kuyoba kusheshe kakhudlwana uma sizisebenzisa on ngokuphelele ihlanzekile teeth.If amazinyo akho kungukuthi ukuhlanza uma mhlophe ngaphambi ukuxubha ke imiphumela kuyoba Ukufiphaza engalingani.
Wonke umuntu uyazi ukuthi izithelo ezisawolintshi, like amawolintshi noma ulamula, kukhona uvithamini C, Kodwa ubuwazi zingenza wena amazinyo mhlophe? Ungasebenzisa ngisho ikhasi lemon noma orange, nonke nina kufanele ukwenze ukukuthinta ebusweni amazinyo akho ngokumelene emuva okuyingxenye, okubangela ukuba ziyakhazimula. Ngokubeka kancane usawoti ikhasi we lemon noma orange, umphumela zingathuthukiswa.
Into yokuqala ebalulekile uma uzama ukugcina amazinyo akho elimhlophe cleanings professional. Thola amazinyo akho bahlanza njalo emva kwezinyanga eziyisithupha kanti njalo ukuhlela nokuqokwa yakho esizayo uma wena at yokuhlanza yakho yamanje.
Lezi imikhiqizo ziqukethe amakhemikhali ibala amazinyo akho. maholoholo shayela sika yiso isiqiniseko amazinyo akho zihlanzekile.
Uma ukuphuza soda, itiye, ikhofi noma iwayini amnyama, ukuphuza amanzi kanye. Lezi iziphuzo mnyama kuyoba ibala amazinyo akho, ikakhulukazi uma bayaphela njalo. Swishing sips ngokushesha kwamanzi azungeze emlonyeni wakho phakathi sips yalezi iziphuzo kungasiza ukuqeda lezi zinsalela ziyavezwa ukuthi kungaphumela staining. Ngemva izingilazi lezi iziphuzo, Xubha amazinyo akho ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Indlela kancane ezaziwayo uthole amazinyo akho whitest kwabo ukusebenzisa izithelo ezithile. A izibonelo ezimbalwa izithelo ezinhle kakhulu ukuthi angakwazi mhlophe amazinyo amawolintshi namawolintshi. Ungase basihlikihle a ikhasi orange ngokumelene ebusweni amazinyo akho ukuze zibe mhlophe ngayo.
Carry isixubho ezitimela ongazisebenzisa emva kokudla ushukela. Lezi zinto ukudla unamathela amazinyo akho kalula, futhi ziqale inqubo staining noma banezele okuthile. Ngemva ukusiphatha ngokwakho sweet, kuthathe isikhashana ukuxubha. Okokuxhubha asidingeki uma khuhla amazinyo bese kugeze kahle.
imiqhele Your akasoze mhlophe ngifana amazinyo akho. imiqhele kuzosala efanayo njengoba amazinyo akho uthole mhlophe. Lokhu engenza Imiqhele ame out nakakhulu kunangaphambili.
Udinga ukuvimbela elibi nenqwaba uqwembe ngoba kungabangela amazinyo akho ukuba abe ezishintshe umbala.
Gcina isixubho stowed away ngoba uma uke wadla candy noma ezinye amaswidi. Ngoba lokhu kudla unamathela amazinyo kalula, angabawa akhuthaze staining. Ngemva kokujabulela amaswidi, ukuxubha imizuzu emibili noma emithathu. Awunayo ukuba wokuxubha, njengoba nje wena khuhla amazinyo kahle futhi uxubha esivulekile ngamanzi.
Organic uwoyela kakhukhunathi ingasetshenziswa njengendlela mhlophe agent esikhulu teeth.If yakho oyisebenzisayo amafutha kakhukhunathi njengoba mouthwash, kungaba mhlophe amazinyo akho cishe ngo 10 emaminithi ngelilanga. Ngemva mayelana 10 imizuzu, Hlambulula umlomo wakho ngetiye kanye shayela njengoba ujwayele belungafica. You bheka ezinye imiphumela esikhathini esingaphansi kwezinsuku ezimbalwa.
Ukuxubha amazinyo njalo ngemva kokudla kuzosiza abagcine khulula kusuka discoloring. Lokhu kubalulekile uma uku ukuphuza ikhofi.
An uwoyela kakhukhunathi eziphilayo kungase kube nje iyindlela yokuthola mhlophe amazinyo akho. Ukunika amazinyo akho angu-10 hashaza nsuku zonke ku uwoyela kakhukhunathi kungaba nemiphumela kakhulu mhlophe smile sakho. Ngemva 10 imizuzu zidlulile, Hlambulula umlomo wakho bese uhlanza amazinyo akho like evamile. Kufanele ubone eminye imiphumela ngemva kwezinsuku ezimbalwa.
Wamazinyo wakho angakutshela ukuthi iyiphi ekhaya amazinyo best ngaphandle kokulimaza koqweqwe lwawo noma izinsini.
Ukuxubha amazinyo akho njalo uma une smile omkhulu. Ukudla nezinye izinto kungaba ukwakha on amazinyo akho futhi ibala kubo. Ngeke kudingeke ukuba ukhathazeke izinyo ukushintsha kombala uma njalo ukuxubha amazinyo akho.
Amanzi buyindlela ebalulekile ekulweni ndawo, kuzwakala. Kukusiza ukuba kokubili uxubha off amazinyo akho kanye ukuvimbela staining. Kuyinto impilo umkhuba omuhle ukugcina ukusetshenziswa kwamanzi usuku nosuku, ikakhulukazi ngemva kokudla.
Ukuze silondoloze mhlophe amazinyo akho, uya wamazinyo njalo ukuze ehlanzekile uyohlolwa kumelwe. Ukuba nezindlu njalo kuyindlela omkhulu ukuze ugcine amazinyo akho amhlophe. Kufanele vakashela udokotela wamazinyo okungenani kanye ezinyangeni eziyisithupha.
Ukusebenzisa mhlophe wokuxubha kuyindlela elula ukuze uthole lezo esibenyezelayo amazinyo emhlophe ubulokhu ngifuna. Through friction, lokhu wokuxubha rids of amabala uqwembe. Ngokuhamba kwesikhathi, kuyomelwe amazinyo licace njengoba ndawo, kuzwakala baqale zinyamalale.
Hydrogen peroxide akufanele ukwelashwa ephephile for mhlophe amazinyo. Kuyinto engaphephile futhi kungabangela amazinyo akho ezishintshe umbala; nani lingase ligcine amazinyo amabili anemibala ehlukene. Gwema yimuphi umkhiqizo has hydrogen peroxide.
Koqweqwe lwawo wembozwe amaminerali on the zokuzivikela amaminerali ungqimba esisiza ukuvimba impande izifo kanye nezinye izinto ezingaba nobungozi amazinyo. Eminye imikhiqizo izinyo mhlophe kungaba nomthelela mhlophe amazinyo akho.
Uma ukuxubha nokuvungula amazinyo akho kabili ngosuku, cishe ngeke abe amazinyo amhlophe kuqhathaniswa nalabo musa ukwenza lokhu ngokuvamile. Ukusebenzisa lezi zindlela kuyokwenza ukususa elibi nenqwaba uqwembe lapho discolors amazinyo akho. Kuwumqondo omuhle ukuxubha amazinyo akho kanye nazo nokuvungula ngemva kokudla.
Uyoba ukuze kuncishiswe ikhofi lakho ukuze uthole smile.As mhlophe kanzima njengoba lokhu kungase kube kubantu abaningi, ikhofi uyimbangela ehamba phambili amazinyo ezishintshe umbala futhi namabala. Zama ukuphuza chocolate hot esikhundleni ikhofi.
The ezisawolintshi lemon juice lime kungaba mhlophe amazinyo akho ngempumelelo kuyinto abafazi Inganekwane endala. Kuwumbono omuhle ukuhlala ngokuphelele kude le ndlela yokwelashwa.
You azi ukuthi ikhambi mhlophe isebenza kuphela amazinyo zemvelo. Noma yimuphi evele yokufakelwa, kuhlanganise imiqhele, Ubuhlobo obuseduze, izimila kanye like ngeke zishintshwe ngombala. Ukusebenzisa amazinyo whiteners wokuyithanda umsebenzi yamazinyo, ezifana imiqhele, ugqame ngokumelene amazinyo akho emvelo white.
Uyoba amazinyo enempilo futhi mhlophe on a basic yokuhlanza routine njalo ngomuthi wokuxubha nokuvungula. Imikhiqizo equkethe baking soda ziyasebenza ekususeni amabala njengoba wena nokuvungula nokuvungula.
Izithelo ezisawolintshi ungaba esiningi acid teeth.You yakho kufanele futhi ugweme ezisawolintshi ayo kanye. I acid oluqukethwe azikufanelekeli amazinyo akho. Wena ubuye bafuna agweme ukudla lokhu kudla ngaphambi kokuthi walala phansi ebusuku, ngoba benza wena maningi amathuba okuba isifo Reflux acid, okuyinto ingase ilimaze amazinyo akho.
Uma unesithakazelo mhlophe amazinyo akho, khuluma nodokotela wamazinyo wokuqala. Mhlophe amazinyo wena akuyona umsebenzi olula yezimonyo. Iya ku odokotela bamazinyo yakho njalo ukuqinisekisa ukuthi amazinyo akho ziphilile. Qiniseka ukuba akhulume wamazinyo mayelana ohlotsheni amazinyo mhlophe.
Yenza powder by ukugaya ndawonye orange peels kanye namahlamvu bay. Lokhu powder singasetshenziswa isixubho sakho kanye nokuzwela.
Musa mhlophe amazinyo akho uma une ezingaphelele zamazinyo like cavities.Make isiqiniseko sokuba adingide lolu daba wamazinyo wakho Ngaphambi kokuba kuqale phi khaya mhlophe izinqubo ezifanele wena.
Musa ukwethemba toothpastes ukuthi bathi uzoba akunike amazinyo mhlophe. Abaningi kuphela kancane mhlophe amazinyo akho, uma ngaso sonke, kodwa ungasebenzisa amanye imikhiqizo uma ufuna amazinyo amhlophe. Uma wenza kanjalo uthenga umuthi wokuxubha mhlophe, thoyizi equkethe baking soda, njengoba empeleni kungasisiza.
Njengoba kushiwo ngaphambili, kukhona abantu abaningi ezahlukene ukuthi ufuna ukuba amazinyo amhlophe. amasu eziningi ezahlukene angazisebenzisa for mhlophe amazinyo akho futhi ekuqedeni ndawo, kuzwakala yellow. Amazinyo akho kungaba mhlophe ngangokunokwenzeka uma umane sebenzisa kwaziswa lapha.
Posted by mhlophe Amazinyo Guide - June 5, 2016 at 4:15 AM
Izigaba: Home Based mhlophe Amazinyo Tags: Bright Smile White, Eqiniseka In Smile Yakho, Smile, amazinyo amhlophe